Sary voalohany sy mombamomba ny Samsung Galaxy A5 (2018) | Androidsis
Samsung Galaxy A5 (2018) no finday tonga lafatra raha tsy manam-bola ho an'ny Galaxy S8 ianao
Samsung Galaxy A5 (2018) dia eo am-pivoarana tanteraka, ary ny sary farany navoaka an-tserasera dia manome antsika ny hevitra momba izay hatolony.
Saika azo antoka, Ny Samsung Galaxy A5 (2018) dia havoaka amin'ny fiandohan'ny taona manaraka. Toy ny mahazatra, ny endriny sy ny fampiasa ao aminy dia hahazo aingam-panahy avy amin'ny sisa amin'ireo andian-tsarimihetsika Galaxy S. Na izany aza, marina ihany koa fa ny andiany Galaxy A dia nisy fivoarana goavambe tato anatin'ny taona vitsivitsy, indrindra fa ny ambaratonga famolavolana.
Famaritana azo atao momba ny Galaxy A5 (2018)
Ny Galaxy A5 2018 dia mety ho tonga miaraka amina processeur Snapdragon 660, Chip eo afovoany mahery indrindra an'ny Qualcomm. Ary koa, ny efijery dia hanana endrika 18.5: 9 ary ny rafitra fiasan'izy ireo dia Android 7.1.1 Nougat miaraka amina interface Samsung.
Tena zava-dehibe ity mpikirakira ity satria vitsy ny telefaona misy Snapdragon 660 amin'izao fotoana izao ary ny zava-bitany dia tena akaiky an'ireo terminal avo lenta.
Any Eropa dia mety hahita maodely miaraka amin'ny mpanera isika aloha Exynos 7885, izay manolotra fampisehoana avo lenta ihany koa.
Ho fanampin'ny Infinity Display azy, ny Galaxy A5 (2018) dia hitondra ihany koa a bokotra natokana ho an'ny Bixby, satria mikasa ny hampitombo ny isan'ny mpampiasa ny mpanampy nomerika azy i Samsung, na dia vitsy aza no tena mampiasa azy.
Raha ny momba ny fakantsary, amin'izao fotoana izao dia tsy dia misy antsipiriany loatra. Ny Galaxy Note 8 dia efa manana fakantsary roa, na izany aza, ho replika mora kokoa an'ny Galaxy S8, ny A5 (2018) dia mety hampiditra azy fakantsary 12 megapixel tokana. Farafaharatsiny mba hijanona eo amin'ny toerany ny mpamaky ny rantsan-tànana.
Mandra-pahatongan'ny taona ho avy, rehefa ho ofisialy ny andiany Galaxy A, dia azo antoka fa hanana vaovao bebe kokoa momba ny Galaxy S9 sy ny ho avy naoty 9. Na izany aza, raha mitady finday mora vidy kokoa ianao manana kalitao sy fahombiazan'ny sasany, ny Galaxy A5 ( 2018) azo antoka fa ho mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy A5 (2018) no finday tonga lafatra raha tsy manam-bola ho an'ny Galaxy S8 ianao
Roberto dia hoy izy:
Raha mivoaka ny taona dia tsy hivoaka izany, tsy azoko hoe maninona no tsy miaraka amin'ny Android Oreo ao anaty boaty, hadalana ny hoe "lany andro" miaraka amin'i Nougat.
Valiny tamin'i Roberto
Inona no loko azony?
Valiny amin'i SANDRA
Jhos dia hoy izy:
Tahaka izany, ny fakantsary an'ny A8 5 dia tsy hanana 2018 mpx fotsiny, raha toa ka 2017 Mpx ny fakantsary an'ny 16. Ho an'ny selfie dia seho izy ireo, na izany aza, ny gyroscope an'ny fakantsary lehibe dia tokony hanatsara azy toy ny S6.
Mamaly an'i Jhos
Ny BlackBerry Motion dia ofisialy izao: ny vidiny, ny masontsivana ary ny fisiana
Ahoana ny fomba famoronana sy fandefasana hafatra mivantana avy amin'ny Samsung Galaxy Note 8